Brackets 1.1 kedu ihe ohuru ma etinye oge? | Site na Linux
Ị chetara brackets? Na FromLinux anyị na-arara ọtụtụ isiokwu nye ederede ederede Isi mmalite Adobe na Community ya kwadoro ya, site na mgbe ahụ ka ọ na - agbanwe obere obere ruo na nsonye 1.1 na ọtụtụ ndozi na atụmatụ.N'isiokwu a anyị ga-enyocha ụfọdụ n'ime ha, mana nke mbụ, ka anyị cheta ụfọdụ nhọrọ ndị na-eme brackets ihe dị iche.
1 Nhazi ntanetị na Brackets
2 Lelee ihe, agba, na ihe oyiyi na Brackets
3 Kewaa echiche na Brackets
4 Mgbatị, ọtụtụ ndọtị na Brackets
5 Brackets wepụ
6 Nkwubi ihe nkedo
Nhazi ntanetị na Brackets
Otu ihe mara mma nke brackets bụ ihe m kpọrọ "Editing Online", nke mejupụtara idezi ihe CSS nke mkpado HTML dị, ma ọ bụ mepụta nke ọhụrụ, site na faịlụ ahụ n'onwe ya. .html na-enweghị imeghe stylesheet file. Naanị anyị ga-etinye cursor na akara kwekọrọ na pịa Ctrl + E.
Lelee ihe, agba, na ihe oyiyi na Brackets
Ihe nkwado na-enyere anyị aka iji anya nke uche hụ ihe oyiyi anyị jikọtara na koodu html anyị ma ọ bụ agba nke ihe onwunwe na faịlụ .css dị ka a hụrụ na foto gara aga. Na mgbakwunye, ị nwere nhọrọ iji hụ mgbanwe ndị anyị na-echekwa na faịlụ HTML anyị na Google Chrome na-akpaghị aka, na-enweghị iwughachi ibe ahụ.
Ndị a bụ ụfọdụ akụkụ mara mma nke Brackets n'oge ahụ, mana ndị ọhụrụ na-abịa ugbu a.
Kewaa echiche na Brackets
Ugbu a, anyị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma karịa na faịlụ abụọ n'otu oge ahụ na-ekewa onye editọ ma ntụgharị ma kwụ ọtọ. Ọ gụnyere nkwado maka Gburugburu na ndabara ma na-enye anyị ohere ịhọrọ font anyị ji na nha ya.
Mgbatị, ọtụtụ ndọtị na Brackets
Ọ bụrụ na e nwere ihe nke Brackets emelitere nke ukwuu (ekele maka Community) ọ dị na ndepụta nke ndọtị dị, ọtụtụ n'ime ha nwere ezigbo mma.
M na-eji ụfọdụ ndị na-adọrọ mmasị dị ka:
Mara mma: Iji chọọ JS, CSS na HTML mara mma
Bootstrap 3 ọkpụkpụ: Iji mepụta HTML Boostrap-njikere.
Mkpokọta Tụlee: Ngwaọrụ DIFF.
Ndepụta Ọrụ: Iji nwee ndepụta nke ọrụ
Git brackets: Otu n'ime ọkacha mmasị m, ọ na-enye m ohere ijikwa ọrụ m na ebe nchekwa GIT ya. M na-ahapụ nseta ihuenyo na ihe oyiyi na-esonụ.
Ndi ozo, otutu ndi ozo ..
Site na 1.1 nke Brackets anyị nwere nhọrọ iji budata ihe dị iche na-agụnye wepụ, nke bụ isi incluye una nueva experiencia de instalación inicial y una característica que le permite colaborar con un diseñador (que use .PSD) y que utilice la nube de Adobe. Enweghị m ike ịgwa gị etu o si arụ ọrụ maka ebumnuche doro anya, mana ọ dị ka nhọrọ mara mma.
Nkwubi ihe nkedo
Na nchịkọta, enwere m ike ịsị na n'oge dị mkpirikpi ọ ga - ewe maka mmepe, Brackets na - ewere ọnọdụ dị mkpa nye m n'etiti ndị ọzọ anyị nwere n'aka. O zughi oke, ọ ka nwere ogologo ụzọ ọ ga - aga (ọ ga - amasị m na ọ ga - agba ọsọ ọsọ dịka Ederede Dị Mma), mana ekele maka atụmatụ ọhụụ na mgbakwunye ndị agbakwunyere, ọ ga - abụ nhọrọ kachasị mma maka ndị ọrụ . Na-eche ihu.
Enwere m ike inwe ọtụtụ obere ihe m ga-ekwu, mana ihe kachasị mma bụ ịnwale ya ma kpee onwe gị ikpe. Ihe nkwado dị na weebụsaịtị ha yana ngwugwu agbakọtara maka Debian / Ubuntu, ma ọ bụ isi mmalite ha. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ ArchLinux ị nwere ike iwunye ya ozugbo na AUR.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Brackets 1.1 kedu ihe ohuru ma etinye oge?
M na-eji nkwado ebe mbipute 0.27 dị na m toro nke ukwuu n'oge a 🙂
Obu a o !! Titan!
Ana m echere Debian Testing 😀
Akụkọ magburu onwe ya.
Ọ ga - ekwe omume ịkwaga ụzọ mkpirisi vi / vim?
Ugbu a onye editọ nke m zụlitere, ebe m chọpụtara na ọ bụ ndabara ọzọ xD
Ọ bụ ezigbo nchịkọta akụkọ, enwere m obi ụtọ kemgbe m nwara ya nke mbụ. Ana m akwado ya. Enwere m olile anya na n'oge dị mkpirikpi m ga-ewepu hegemony site na SublimeText.
Enwere m olile anya na akwukwo di elu muta ihe ma obu abuo. O nwere echiche na-adọrọ mmasị.
Ha abụọ ga-amụta ..
M na-eji ya na ebe ịpịrị igodo "Ctrl + E" ọ dịghị ihe na-egosi, ọ na-agwa m na faịlụ adịghị adị na ọ bụrụ na m chọrọ ịme otu.
Agbalịrị m ịwụnye ya na Antergos (yaourt -S brackets), mana ọ dị nwute na enweghị m ike ịkwụsị nwụnye ahụ n'ụzọ ziri ezi. Ana m enweta njehie na-esonụ:
Ọrụ "ọsọ" curl-dir: node-linux64 "(curl-dir) ọrụ
Faịlụ "nbudata / node-v0.10.24-linux-x64.tar.gz" kere.
Na-agba ọsọ "node-ọcha"
Na-agba ọsọ "node-mac"
Na-agba ọsọ «ike-oru ngo» ọrụ
Iwuli faịlụ oru ngo
Nye, na-enweghị njehie.
CXX (lekwasịrị anya) / Release / obj.target / libcef_dll_wrapper / libcef_dll / transfer_util.o
mee: g ++: Achọtaghị mmemme ahụ
libcef_dll_wrapper.target.mk:212: ntuziaka okpu maka iche 'si / Hapụ / obj.target / libcef_dll_wrapper / libcef_dll / transfer_util.o'
mee: *** [si / Hapụ / obj.target / libcef_dll_wrapper / libcef_dll / transfer_util.o] Njehie 127
==> NJỌ: E nwere okuku na-ewu ().
==> NR ERR Make: Makepkg enwenwughi ike ikpokọta brackets.
==> Malitegharịa ekwentị mgbodo mkpokọta? [y / n]
Onwere onye ma ihe o nwere ike ibu ma obu kedu ka m ga esi dozie ya ka m jiri Brackets?
Ọ bụrụ n'ịhụ na ịnweghị ike, wụnye site na ụgwọ.
M si AUR mgbe niile wụnye brackets-bin
Brackets bin bin ọrụ. Daalụ!
Agbalịrị m ndị editọ dị iche iche mana na njedebe m na-abịarute na Kate. Na-edezi CSS na ntanetị, ịlele ihe oyiyi ma ọ bụ agba dị oke oke ma na-echekwa oge, mana ị chere na ndị a bụ ihe zuru oke iji gafee Kate, nke mechara jikọta ihe niile bara uru na-apụta na ndị editọ ndị ọzọ, na Brackets? Amaara m na m ga-enweta azịza kachasị mma site na ịnwale ya n'onwe m, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ na-agwụ m ike ịnwale nke a ma ọ bụ mmemme ahụ ma n'ikpeazụ, m ga-alaghachikwute ndị na-enye m ezigbo nsonaazụ kemgbe ọtụtụ afọ.
Nanị nsogbu m na-ahụ na KATE bụ na ọ nweghị koodu autocompletion, kpọọ na ndị ọzọ 🙁
O yiri ka akpachaghị anya nwere: http://kate-editor.org/about-kate/
Ọfọn, maka HTML na CSS ahụtụbeghị m ya.
Ihe akpaghị aka nke na-emeghị ihe dị mkpa. Naanị ihe ọ ga - eme ka ọ megharịa gị ma ọ bụrụ na e nwere okwu ga - ebido otu ihe ahụ na dọkụmentị ahụ.
Akpa nhọrọ m pịa 'Dynamic Preview' dị naanị na Google Chrome…. -> Iwepu….
Enwere mania na Google Chrome? ha na-echefu na nke a bụ Linux? Netflix, WhatsApp na ugbu a Brackets ...
Ee, ọ bụ. Ihe na - eme bụ na nhọrọ a bara uru naanị ma ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ na .html, nke dị mma maka nhazi, mana mgbe ị mepụtara isiokwu WordPress, mgbe ị na - arụ ọrụ na faịlụ .php ọ baghịzi uru 😀
N'ime ụdị ọhụụ a enwere nkwado ọtụtụ ihe nchọgharị maka ndụ dị ndụ, mana ọ nwere nkwarụ na ndabara. Na faịlụ mmasị ị tinye "livedev.multibrowser" a: eziokwu, m na-eji ya na firefox ma ọ na-arụ ọrụ.
Ndewo, kedu ka esi etinye ya, n'ihi na m na-etinye koodu ahụ na oge ọ bụla m mepere mmemme ahụ enwere m njehie na: faịlụ mmasị enweghị usoro JSON ziri ezi.
Ndewo, gini bụ isiokwu ị na-eji? Ọ mara mma 🙂